Kwabelwane Nge-Neat Studio ne-Professional Bachelor - I-Airbnb
Kwabelwane Nge-Neat Studio ne-Professional Bachelor
Ikamelo elihlanganyelwayo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Arnold
U-Arnold uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Sawubona Mhambi. Siyakwamukela ekhaya lakho kude nasekhaya.
Ngingusokhaya onomqondo ovulekile futhi ovumelana nezimo, umhlengikazi we-rehab/physio ngokomsebenzi kanye nesihambi ngothando futhi ngingathanda ukwabelana ngendawo yami kunoma iziphi izihambi ezingathanda ukuvakashela i-Al Ain. Ngincamela izihambeli zabesilisa njengoba lesi kuyindawo okwabelwana ngayo kodwa izivakashi zabesifazane ezinomqondo ovulekile nazo zamukelekile.
Leli yi-1-Bedroom Apartment ngakho mina nawe sizobe sabelana ngazo zonke izikhala (igumbi lokuhlala, ikhishi, igumbi lokulala kanye negumbi lokugeza).
Mayelana nokuhlelwa kokulala, sizosebenzisa igumbi lokulala elifanayo kodwa ngizokuvumela ukuthi ulale embhedeni wami othokomele osayizi wenkosi, futhi ngizothatha umbhede kasofa ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Umakhelwane impela. Izitolo ze-Megamart nezincane zisebangeni lokuhamba ngezinyawo.
Ngizobe ngihlala endaweni eyodwa ngakho uzobe uxhumana nami. Noma ungafuni ukukhuluma, nami ngipholile ngalokho.